Ralph Fiennes – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Schindler’s List (1993) Unicode ကမ်ဘာပျေါက အကောငျးဆုံး Biographical ဇာတျကားတှထေဲမှာ No.1 ရရှိထားတဲ့ဇာတျကားဖွဈပါတယျ။ Schindler’s List ဇာတျကားဟာ German စီးပှားရေး သမားဖွဈတဲ့ Oskar Schindler အကွောငျး ရိုကျကူးထား တာဖွဈပါတယျ။ ဒုတိယ ကမ်ဘာစဈ အတှငျး နာဇီတှရေဲ့ လူမဆနျစှာ သတျဖွတျမှုတှေ အကွား ရပျတညျ နရေတဲ့ Polish Jewish ဒုက်ခသညျ ၁၀၀၀ ကြျောကို အသကျဘေး ကနေ လှတျအောငျ သူ့ရဲ့ စကျရုံ အမြိုးမြိုးမှာ နထေိုငျ လုပျကိုငျ စခေငျြအားဖွငျ့ စောငျ့ရှောကျခဲ့ပုံတှကေို ရှုစားရမှာ ဖွဈပါတယျ။ Biographical Movies တှထေဲမှာ အကောငျးဆုံး ဇာတျလမျးအဖွဈ ရပျတညျ နပွေီး အောငျမွငျမှုမြားစှာ ရရှိခဲ့ပါ တယျ။ အျောစကာဆု ၇ ဆုအပွငျ အခွားဆုပေါငျး ၇၀ နဲ့ ဆု ၂၅ ဆုအတှကျ ...
IMDB: 8.9/10 1189048 votes
Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit (2005) Unicode ငယျငယျတုနျးက ကွညျ့ခဲ့ဖူးတဲ့ ဒီ Animation လေးကို အလှမျးပွပွေနျကွညျ့နိုငျအောငျ တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ ရဲဝနျထမျးတဈယောကျဖွဈတဲ့ Wallace တဈယောကျဟာ သူ့လကျစှဲတျောခှေးလေး Gromit နဲ့ သီးနှံစိုကျခငျးတှကေို ဖကျြဆီးတဲ့ရနျသူတှကေနေ ကာကှယျပေးတဲ့ အလုပျကိုအဓိကလုပျရတာပါ။ တဈနမှေ့ာတော့ စိုကျခငျးတှမှော ယုနျပေါငျးမြားစှာရဲ့ ဖကျြဆီးခံရတာတှကွေောငျ့ သီးနှံပွိုငျပှဲမတိုငျခငျ ဒီပွသာနာကိုဖွရှေငျးဖို့စိုးရိမျလာရပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ Wallace တဈယောကျ ဒီယုနျတှရေဲ့ အန်တာရယျကိုဖွရှေငျးနိုငျပါ့မလား ? နောကျကှယျကဘယျသူတှကွေိုးကိုငျနလေဲဆိုတာကို ရှာဖှဖေျောထုတျဖို့ဖွဈလာပါတော့တယျ Zawgyi ငယ်ငယ်တုန်းက ကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဒီ Animation လေးကို အလွမ်းပြေပြန်ကြည့်နိုင်အောင် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ရဲဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Wallace တစ်ယောက်ဟာ သူ့လက်စွဲတော်ခွေးလေး Gromit နဲ့ သီးနှံစိုက်ခင်းတွေကို ဖျက်ဆီးတဲ့ရန်သူတွေကနေ ကာကွယ်ပေးတဲ့ အလုပ်ကိုအဓိကလုပ်ရတာပါ။ တစ်နေ့မှာတော့ စိုက်ခင်းတွေမှာ ယုန်ပေါင်းများစွာရဲ့ ဖျက်ဆီးခံရတာတွေကြောင့် သီးနှံပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင် ဒီပြသာနာကိုဖြေရှင်းဖို့စိုးရိမ်လာရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ Wallace တစ်ယောက် ဒီယုန်တွေရဲ့ အန္တာရယ်ကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါ့မလား ? နောက်ကွယ်ကဘယ်သူတွေကြိုးကိုင်နေလဲဆိုတာကို ...
IMDB: 7.4/10 122419 votes
Wrath of the Titans (2012) Wrath of the Titans (2012) သည် IMDb 5.8/10 Google users 84% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Jonathan Liebesman က ရိုက်ကူးထား၍ Dan Mazeau, David Leslie Johnson တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Sam Worthington, Liam Neeson, Rosamund Pike တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Fantasy ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. Perseus က မြေအောက်ကမ္ဘာမှာ သူရဲ့ သား အာရက်စ် ဖမ်းခြင်းကို ခံရတဲ့ သူရဲ့အဖေကို ကယ်ဖို့ မြေအောက်ကမ္ဘာကို သွားရောက်ကာ အစ်ကို ဟေးဒီစ်က ရှေးဟောင်း တိုက်တန်တွေကို ဖော်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ ဘယ်လိုအက်ရှင် စွန့်စားခန်းတွေ ...
IMDB: 5.7/10 171,346 votes